မထင်မှတ်ထားတဲ့ Surprise လို့ ပြောရမှာပေါ့ ဆိုတဲ့ မျိုးကိုကိုစန်း - Yangon Media Group
မိတ်ကပ် – NK Aung Sha, ဝတ်စုံ – My Fashion(USA), ဓာတ်ပုံ – ပီတာမင်းဆက်၊
8days ရဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက် တစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ် မတူ ညီတဲ့ရသတွေကို ကြိုးစားတင်ဆက် ပေးခဲ့ရာ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ပုရိသ တွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းကိုခံနေရတဲ့ မျိုးကိုကိုစန်းကို Cover Star အဖြစ် ရွေး ချယ်ခဲ့ပါတယ်။
Q. လိင်အင်္ဂါခွဲစိတ်ပြီးနောက် ပိုင်း ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲ။
A. အရင်ကထက် ပိုပြီး Confidence ရှိသွားပြီ။ ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူး။ အရင် ကတည်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မိန်း ကလေးလို့ ခံယူထားတာကြောင့် အခုလည်း အဲဒီအတွက် သိပ်အာရုံ မရှိဘူး။ အရင်ကဆိုလည်း မိန်းက လေးမဖြစ်သေးတာတောင်မှ ကိုယ် က ယောက်ျားလေးဆိုတာကို မေ့ နေတယ်။ မိန်းကလေးဟော်မုန်း ဆေးတွေစားနေရတာကြောင့် မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ သိမ်ငယ်စိတ်၊ ကြောက်စိတ်တွေ၊ ဒေါသစိတ်၊ အလိုမကျတာတွေဖြစ်လာတယ်။
Q. ဘယ်လိုခွဲစိတ်ပါစေ ကိုယ် က မိန်းမဖြစ်မသွားဘူးဆိုတဲ့စကား အပေါ်…
A. လူအမျိုးမျိုးပါပဲ။ ကိုယ်က တော့ Negative ဖြစ်တဲ့ Comment တွေကို Serious မဖြစ်ဘူး။ အလေးမထားဘူး။ သူတို့လက်ခံ သည်ဖြစ်စေ၊ လက်မခံသည်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်က မိန်းမလို့ခံယူထားရင် ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် မိန်းမလို့ သတ်မှတ်လို့ရ တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီကိစ္စအပေါ် Heavy မဖြစ်ဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ နေတာမှန်ပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်က ထမင်းကျွေးတာမဟုတ်လို့ သိပ်ဂရု မစိုက်ဘူး။ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ သူငယ် ချင်းတွေ လက်ခံရင်ရပြီ။ လူဖြစ်လာ တဲ့ ဘဝသက်တမ်းတိုတိုလေးမှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာလုပ်မယ်။ နောင်တ ရတာလည်းမရှိဘူး။
Q. Facebook မှာ ဝန်းရံတဲ့သူ တွေ များလာတဲ့အပေါ် ခံစား ချက်…
A. အရမ်းပျော်တယ်။ အား ပေးတဲ့သူတွေ၊ ချစ်တဲ့သူတွေ အရမ်း များလာတယ်။ အခုရက်ပိုင်းမှာ ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေ များ လာတယ်။ အရင်ကဆို မိန်းကလေး ပရိသတ်ပဲရှိတယ်။ ကိုယ့်မှာ ယောက်ျားလေးတွေကြိုက်လောက် တဲ့ ရုပ်ရည်မျိုးမရှိဘူး။ Body Structure လည်း မလှဘူး။ အေး အေးဆေးဆေးနေပြီး စာတွေပဲရေး တော့ မိန်းကလေးပရိသတ်ပဲ များ တယ်။ ရုတ်တရက်ကြီး ယောက်ျား လေး ပရိသတ်များလာတာကို မထင်ထားခဲ့ဘူး။ ဆွဲဆောင်မှုမရှိဘဲ အားပေးကြတဲ့ယောက်ျားလေး ပရိ သတ်ရော၊ မိန်းကလေးပရိသတ်ကို ပါ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
A. အသက် ၁၅ နှစ်၊ ၁၆ နှစ် အရွယ်ကဆိုရင် အချစ်က ဘဝကြီး လို့ ထင်ခဲ့တယ်။ မြီးကောင်ပေါက် အရွယ်ဆိုတော့ အရာရာမှာ အချစ် က အရေးကြီးဆုံးပဲ။ အခု အသက် ၂၄ နှစ်ထဲမှာ အချစ်က အရေးမ ကြီးဘူးလားဆိုရင် ကြီးတယ်။ ဒါပေ မဲ့ တစ်ဘဝလုံးနဲ့ချီပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် တွေ ယိုင်လဲသွားလောက်တဲ့အထိ အချစ်ကိုဦးစားပေးဖို့ မလိုတော့ဘူး ထင်တယ်။ လူလတ်ပိုင်းထဲရောက် လာတာကြောင့် ကိုယ့်ဘဝအောင် မြင်ဖို့အတွက်၊ ရပ်တည်မှုအတွက်၊ အနာဂတ်အတွက် ကြိုးစားရမယ်။ စဉ်းစားဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်း အသက် ၃ဝ ကျော်လောက်မှ စဉ်း စားတော့မယ်။ လက်ရှိမှာ ချစ်သူ မရှိသေးပါဘူး။
Q. အိမ်ထောင်ဘက်ဆိုရင် ဘယ်လိုပုံစံလိုချင်လဲ။
A. ရင့်ကျက်လာတဲ့နောက်မှာ ကိုယ့်အပေါ်နားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူ၊ ကိုယ့်ဘဝကို နားလည်ပြီး ချစ်ပေး နိုင်တဲ့သူကို သဘောကျလာတယ်။ တကယ်တမ်း ချစ်သူထားဖြစ်ရင် တောင် အဲဒီလူရဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင် ကိုလည်း မကြည့်ဘူး။ Background ကိုလည်း စိတ်မဝင်စားဘူး။
သူ့ရဲ့စိတ်ထားနဲ့ ကိုယ့်အပေါ်ထား ရှိတဲ့ ခံစားချက်ကိုပဲ ခေါင်းထဲထည့် ထားတယ်။ မိဘတွေအတွက် သမက်ကောင်းကို လိုချင်တယ်။ တစ်ချိန် အိမ်ထောင်ကျခဲ့ရင် ကိုယ့် မိဘကို ထောက်ပံ့တဲ့အခါ မကြည် ဖြူတာမျိုး။ ကိုယ့်မိဘကလည်း သမက်မျက်နှာကြည့်ရတာမျိုး မလို ချင်ဘူး။ ကိုယ့်မိဘကို သူ့မိဘလို သဘောထားနိုင်တဲ့သူမျိုးမရရင် အပျိုကြီးပဲ ဖြစ်သွားမှာပါ။
Q. အိမ်ထောင်ပြုပြီးရင် ရင် သွေးယူဖို့က….
A. မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိဘမေတ္တာ ချို့တဲ့နေတဲ့ မိဘမဲ့ကလေးတွေ အများကြီးရှိတယ်။ တချို့တွေက ကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇမဟုတ်ရင် ကောင်း နိုင်ပါ့မလားဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ ကံ၊ ကလေးရဲ့ကံပါပဲ။ ရေစက်ပါလာရင် ကလေးတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခွင့်ရမှာပါ။ စီးပွားရေးပြေလည်သွားခဲ့ရင် တတ် နိုင်သလောက် မိဘမဲ့ကလေးတွေကို မွေးစားသွားမှာပါ။
Q. Cover ရိုက်ကူးရတဲ ခံစား ချက်…
A. အရမ်းပျော်ပါတယ်။ မထင်မှတ်ထားတဲ့ Surprise လို့ ပြောရမှာပေါ့။ ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့ ပရိ သတ်တွေ အားပေးနေလို့ အခုလို အခွင့်အရေးရရှိတယ်လို့ ထင်ပါ တယ်။ ဒီထက်မက အားပေးပြီး ချစ် ပေးကြပါဦး။
အနုပညာသတင်းများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ အင်တာဗျူးများကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ရန် https://www.facebook.com/celebrities8daysaweekjournal တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
“အနုပညာအလုပ်တွေကို မေမေတိုက်တွန်းလို့ လုပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး” ဆန်းသစ်လ